35 taona an-tsehatra – Hotsidihin’i Erick Manana Razilinah, Lôlô, Feo Gasy - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
35 taona an-tsehatra – Hotsidihin’i Erick Manana Razilinah, Lôlô, Feo Gasy
Erick Manana sy Jenny tamin'ny fampisehoana nataony farany teo
Hanamarika ny faha-35 taona niakarany an-tsehatra i Erick Manana. Ho fanamarihana izany ny fampisehoana hataony amin’ny sabotsy 05 mey ho avy izao, etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina.
Hotsidihiny avokoa ireo sehatry ny hira nandalovany sy nahafantarana azy, miainga amin’ny famelomana indray ireo hiran-dRazilinah, ny vazon’ny Lôlo sy ny tariny ary ny sanganasan’ny tarika Feo Gasy. Hanotrona sy hiara-dia aminy mandritra ny fampisehoana anefa i Jenny, ilay andriambavilanitra vahiny mpitendry lokanga sy mampiara-peo aminy sy ny tarika Feo Gasy. Ity tarika ity izay natsangan’i Erick Manana niaraka tamin-dRakoto Frah ary ahitana an-dry Kolibera, Nini, Bariliva ary Fafah sy Benny.
Etsy ankilany kosa dia mpitendry nanara-dia an’i Erick Manana sy Jenny ry Solofo Bota (angorodao), Donné Randria Ernest (ampongalava), Titi (saxophone) ary Sata.
Ho tonga eto an-tanindrazana ny 29 avrily izao ireo mpanakanto monina any ivelany, ka handray anjara amin’io seho hatolotr’i Erick Manana io ary hiatrika avy hatrany ny famerenan-kira eny amin’ny trano fandraisam-peon’ny m’Ritsoka, izay mpikarakara ny fampisehoana.
Nambaran’i Erick Manana fa hoentina ahatsiarovana ireo efa nodimandry, ka nanampy azy teo amin’ny sehatry ny hira, ity fampisehoana ity. Nosinganiny ry Razilinah izay nambarany fa nahafantarana azy tamin’ny famelomana ireo hirany. Ao ihany koa i Raoul (tarika Mahaleo) izay nolazainy kosa fa nanosika azy hiroso amin’ny mozika ary Rakoto Frah, izay singa iray ao amin’ny Feo Gasy.
Batou beach Ambohimanambola – Fitsangantsanganana feno no natolotra tamin’ny «mi’Ritsoka mifety»(0)
Niavaka tamin’ireo seho faran’ny herinandro ny «mi’Ritsoka mifety», notanterahina, teny amin’ny Batou Beach Ambohimanambola, omaly tontolo andro. Feno ny fitsangan­tsanganana satria ankoatra ny tontolon’ny mozika, izay niaraka tamin’ ireo lokona gadona ahafantarana ity trano mpamo­katra ity, dia niasa avokoa ireo toerana sy faritra samy hafa tao anatin’ny Batou Beach. Niavaka satria, tamin’ ny alalan’ny fanatanjahantena Zumba, niarahana tamin’ny Tambour Gasy, no nanokafana ny hetsika. Nanaraka azy ny hiragasy nataon’ny tarika Raveloson. Ity farany izay nanohy ny fanentanana tamin’ny fampianarana dihy gasy toy ny latsitanana sy ny maro hafa. Taorian’izay dia nisantatra ny fiakarana an-tsehatra tamin’ny mozika ireo mpanakanto miara-miasa amin’ny mi’Ritsoka ka anisan’ireny ry Iraimbilanja, Samoëla… Nisongadina ihany koa anefa ireo «revy ambony tamboho», niarahana tamin-dry Tsiakoraka, Erick Manana sy ny tariny ka niangalian-dry zareo ny hiran’ny tarika Feo Gasy, Lôlô sy ny tariny ary Tselonina, izay vahiny tsy nampoizina tamin’ny seho toa an-dry tarika ’Zay, Edgard Ravahatra… Nahafa-po ny maro tamin’ity seho ity ihany koa ny nahitana indray an’i Lalatiana izay narahin’i Fanaiky, Mendrika ary Solofo Bota, tamin’ity indray mitoraka ity, izay niangaly ireo hirany tamin’ny gadona jazz. Mpanakanto marobe izay miara-miasa sy mbola hiara-hiasa amin’ny mi’Ritsoka no nandray anjara tamin’ny hetsika izay tafiditra amin’ny fankalazana ny faha-5 taonany. Faly Ran. Club Nautique Ivato – Tara ny fampisehoana, kitoatoa ny fikarakarana(0)
Nahitana tsy fahamatorana. Noheverina fa hiara-dia amin’ny fitsangantsanganana ny fijerena fam­pisehoana, izay nandiso fanantenana ny maro nandritra ny seho «tafaray samy kaka», izay natolotry ny Madasoleil, teny amin’ny Club Nautique Ivato, omaly. Tara ny fampisehoana ary hita fa be ny kitoatoa tamin’ny fikarakarana. Tamin’ny 12 ora antoandro tany ho any mantsy vao nisantatra ny fampisehoana i Tinah- Ti, raha nihevitra ny maro fa any amin’ny 10 ora any, raha tara indrindra, dia hanomboka. Ora iray mialoha izany rahateo vao nanomboka nanao ny fandrindrana ny fanamafisam-peo samihafa ireo tarika hiaka-tsehatra. Vokany, tsy nandeha tamin’ny laoniny ny fandraisana anjaran’ireo nanokatra ny sehatra. «Mba te hahita ny seho ataon’ireo mpanakanto rehetra izahay nefa voatery tsy maintsy hody aloha satria miaraka amin’ny ankizy, fantatra fa hanahirana rahateo ny fiara fita­terana», hoy ny fitarainan-dRasoarinoro, anisan’ireo mpijery ity seho ity. Taorian’i Tinah-Ti dia nanohy ny fampisehoana Ramora Favori, izay hita fa tao anatin’ny heriny na dia teo aza ny voina nahazo azy, ny herinandro lasa teo. Nanohy ny seho taorian’izay ry Jarifa, Vaiavy Chila ary namarana azy ry Wawa. FR
Hipoka indray – Vita sedran’ny fiarahan’ny mpanakanto maro ny Coliseum Antsonjombe(0)
Toy ny tamin’ny alatsinainin’ny Paska teo, dia hipoka tanteraka indray ny Coliseum Antsonjombe, omaly, tao anatin’ilay hetsika «Lundi de Pentecôte goavam-be». Araka izany, hatreto dia vita sedran’ny fiarahan’ny mpanakanto maro ny Coliseum Antsonjombe. Hatramin’ny nisoka­fany mantsy dia io fiarahana mpanakanto maromaro io hatrany no mbola vokatra natolotr’ ireo mpikarakara ho an’ny mpijery ary saika tamin’ny andro fety sy andro natokana hialan’ ny olona voly. Andra­sana izany izay ho tohin’ny fampiasana io fotodrafitrasa anisan’ny raitra eo amin’ny sehatry ny fampisehoana io. Toy izany koa ny mpanakanto sahy hisedra irery ity kianja mahazaka mpijery hatramin’ny 50 000 ity. Raha ny seho omaly dia samy nampitsinjaka ireo vahoaka marobe tonga teny an-toerana ireo mpanakanto na­tsoin’ny Madapro hanafana ny fampisehoana, nahitana ireo andrarezin’ny mozika mafana ka nahitana an-dry Black Nadia, Jean-Aimé, Tsiliva. Vahiny nasain’ny mpikarakara manokana kosa i D’Alvis, izay anisan’ireo manomboka manana ny toerany amin’ny fitrandrahana ny gadona «r’n’b tropikaly». FR
Coliseum Antsonjombe – Hanohy ny seho ry Black Nadia, Jean-Aimé, Tsiliva ary D’Alvis Taorian’ny seho tamin’ny alatsinainin’ny paka, hanohy sy seho etsy amin’ny Coliseum de Madagascar etsy Antsonjombe ry Black Nadia, Jean-Aimé, Tsiliva ary D’Alvis. «Alatsinainin’ ny pantekôty goavambe», fampisehoana faharoa handoavam-bola ao amin’ity toerana ity ary tafiditra amin’ny tanjon’ny Madapro, mpikarakara amin’ny fanazarana ny olona hitia hijery fety sy hilanona eny an-toerana. Adin’ny roa avy ny anjaran’ny mpanakanto tsirairay ka hifandimby hanafana ireo mpijery ireo
zavakanto, Mpanoratra Rijakely, 20.04.2012, 23:40	FIARAHAMONINA